Cu (ကြေးနီ) => ? | Chemical Equation Balancer
Cu =? | ဓာတုညီမျှခြင်း Balancer
67 ရလဒ်များ တွေ့ရှိရ
အောက်ဆိုဒ် - လျှော့ချရေးတုံ့ပြန်မှု Single- အစားထိုးတုံ့ပြန်မှု
2AgNO3 + Cu → ၂ Ag + Cu (NO)3)2
ငွေအနိုက်ထရိတ် ကြေးနီ ငှေ ကြေးနီ (ii) နိုက်ထရိတ်
(ရက်) (rn) (rn) (ရက်)
(khôngmàu) (đỏ) (xám) (ဆန်လမ်)
ညီမျှခြင်း 2AgNO ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ3 + Cu → 2Ag + Cu (NO)3)2
AgNO3 (ငွေနိုက်ထရိတ်) သည် Cu (ကြေးနီ) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့်အခြေအနေဟူသည် အဘယ်နည်း။
Ag (silver) နှင့် Cu(NO3)2 (ကြေးနီ(ii) နိုက်ထရိတ်) ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
AgNO3 (ငွေနိုက်ထရိတ်) သည် Cu (ကြေးနီ) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်၊
ဆားဖြေရှင်းချက်သည်ဆားနှင့်သတ္တုအသစ်ဖန်တီးရန်သတ္တုနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သည်။ ကြေးနီကိုငွေဖြင့်ဆားထဲမှထုတ်ပစ်သည်။ ကြေးနီစစ်ဆင်ရေးသည်ငွေထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ 2AgNO နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ3 + Cu → 2Ag + Cu (NO)3)2
ဓာတ်ပြုနိုင်သော Cu (ကြေးနီ) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
Cu (ကြေးနီ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ Cu (ကြေးနီ) ဓာတ်ပြုနိုင်သည့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
Ag (ကြေးနီ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် Ag (ငွေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် Cu(NO3)2 (ကြေးနီ(ii) နိုက်ထရိတ်) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
Cu(NO3)2 (ကြေးနီ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ Cu(NO3)2 (ကြေးနီ(ii)နိုက်ထရိတ်) ပါသည့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ကြေးနီ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် ရေ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ကြေးနီ (ii) sulfate
(rn) (,c, nóng) (လန်) (khi) (ရက်)
(đỏ) (khôngmàu) (khôngmàu) (khôngmàu) (ဆန်လမ်)
122 1 1 Hệsố
Cu ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4
Cu (ကြေးနီ) သည် H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့်အခြေအနေဟူသည် အဘယ်နည်း။
H2O (ရေ) နှင့် SO2 (ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) နှင့် CuSO4 (ကြေးနီ (ii) sulfate) တို့ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
သေးငယ်သောကြေးချပ်အချပ်အချို့ကိုစမ်းသပ်ပြွန်ထဲသို့ထည့်ပြီး၊ H2SO4 ကိုစုစည်းထားသည့်စမ်းချောင်းထဲသို့ထည့်ပြီး၊ စမ်းချောင်းကိုညင်ညင်သာသာအပူပေးပါ။
Cu (ကြေးနီ) သည် H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်၊
ပြင်းထန်သောနှင့်ပူပြင်းသည့် H2SO4 သည်ကြေးနီနှင့်ဓာတ်ပြုပြီး SO2 ဓာတ်ငွေ့ကိုဖန်တီးရန်နှင့် CuSO4 ဖြေရှင်းချက်သည်အပြာဖြစ်သည်
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ Cu နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4
H2O (sulfuric acid) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O (ရေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
SO2 (sulfuric acid) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် SO2 (ဆာလ်ဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် CuSO4 (ကြေးနီ(ii) sulfate) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
CuSO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ CuSO4 (ကြေးနီ(ii) sulfate) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ကြေးနီ ဆာလဖာ ကြေးနီ (ii) sulfide
(rn) (rn) (kt)
(đỏ) (ဗန်ချမ်း) (အဲ)
Cu ညီမျှခြင်းအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များ + S → CuS
Cu (ကြေးနီ) သည် S (ဆာလ်ဖာ) နှင့် ဓာတ်ပြုသည့် တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေ ကဘာလဲ။
အပူချိန်: အခန်းအပူချိန် ဓာတ်ကူပစ္စည်း: CS2 အရည်
CuS (ကြေးနီ(ii) sulfide) ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
Cu သည် S နှင့်ဓါတ်ပြုပါသည်
Cu (ကြေးနီ) သည် S (ဆာလဖာ) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်၊
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ Cu နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ + S → CuS
Reactant S (ဆာလဖာ) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
S (ဆာလဖာ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ S (ဆာလဖာ) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် CuS (ကြေးနီ(ii) sulfide) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
CuS (ဆာလ်ဖာ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ CuS (ကြေးနီ(ii) sulfide) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 +2မဟုတ်ပါ + 3CuSO4
ကြေးနီ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ် ရေ ဆိုဒီယမ် sulfate နိုက်ထရိုဂျင်မိုနောက်ဆိုဒ် ကြေးနီ (ii) sulfate
(rn) (နောက်ချေး) (rn) (လန်) (rn) (khi)
(đỏ) (khôngmàu) (စကား) (khôngmàu) (စကား) (khôngmàu)
3424123 Hệsố
ညီမျှခြင်း 3Cu ၏ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 +2မဟုတ်ပါ + 3CuSO4
Cu (ကြေးနီ) သည် H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး NaNO3 (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) နှင့် ဓာတ်ပြုမှုအခြေအနေကား အဘယ်နည်း။
H2O (ရေ) နှင့် Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ်) နှင့် NO (နိုက်ထရိုဂျင်မိုနောက်ဆိုဒ်) နှင့် CuSO4 (ကြေးနီ (ii) sulfate) တို့ကို မည်သို့တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
Cu H2SO4 / NaNO3 နှင့်ဓာတ်ပြုပါသည်
Cu (ကြေးနီ) သည် H2SO4 (ဆာလ်ဖျူရစ်အက်ဆစ်) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်စဉ်သည် NaNO3 (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။
ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများ 3Cu နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ထပ်မေးခွန်းများ + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 +2မဟုတ်ပါ + 3CuSO4
Reactant NaNO3 (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
NaNO3 (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ NaNO3 (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
H2O (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် H2O (ရေ) ပါသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကား အဘယ်နည်း။
Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ Na2SO4 (ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ်) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
NO (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် NO (နိုက်ထရိုဂျင်မိုနောက်ဆိုဒ်) မပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
CuSO4 (ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ်) ၏ဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကားအဘယ်နည်း။ CuSO4 (ကြေးနီ(ii) sulfate) ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
ကလိုရင်း ကြေးနီ ကြေးနီ (ii) ကလိုရိုက်
(khi) (rn) (rn)
(vàng l )c) (đỏ) (စကား)
ညီမျှခြင်း Cl ၏နောက်ထပ်အချက်အလက်များ2 + Cu → CuCl2
Cl2 (ကလိုရင်း) ၏ တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေသည် Cu (ကြေးနီ) နှင့် ဓာတ်ပြုသည် ။
CuCl2 (ကြေးနီ(ii) ကလိုရိုက်) ကို မည်သို့ တုံ့ပြန်မှုများ ဖြစ်ပွားနိုင်သနည်း။
Cl2 (ကလိုရင်း) သည် Cu (ကြေးနီ) နှင့် ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ဖြစ်ရပ်ဆန်း၊
ဓာတုတုံ့ပြန်မှု Cl2 + Cu → CuCl2
ဓာတ်ပြုနိုင်သော Cl2 (ကလိုရင်း) နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ
Cl2 (ကလိုရင်း) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ Cl2 (ကလိုရင်း) ဓာတ်ပြုမှုအဖြစ် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများသည် အဘယ်နည်း။
ထုတ်ကုန် CuCl2 (ကြေးနီ(ii) ကလိုရိုက်) နှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ
CuCl2 (ကြေးနီ) ၏ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကား အဘယ်နည်း။ ထုတ်ကုန်အဖြစ် CuCl2 (ကြေးနီ(ii) ကလိုရိုက်) ပါရှိသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။